Tsara kokoa ny safidy miainga amin’ny fanantenana fa tsy ny tahotra – Blaogin'i Voniary
Maro ny boky sy lahatsoratra navoakan’ny mpikaroka sy mpandalina momba ny fahombiazana, fa zavatra iombonan’izy ireny dia ny hoe ilaina ny mametraka tanjona. Ireny tanjona apetraka ireny no mitaratra ny safidim-piainan’ny isam-batan’olona. Noho izany, misy ifandraisany tsara ny kalitaon’ny safidy atao sy ny tranga misy eo amin’ny fiainan’ny tsirairay. Tsy misy kisendrasendra io, fa izay afafy no jinjaina. Ny fanontaniana mipetraka manoloana ny olona tsirairay izany dia ny hoe : « tahaka ny inona sy safidinao ? » ary koa hoe « inona no mahatonga anao hanao ny safidy iray ? »
Safidy ny fiainana
Miainga amin’ny akanjo hanaovana anio, ny ho atao laoka atoandro, ny zotra alaina raha hamonjy toerana iray ka hatramin’ny fianarana ho rantovina, ny tanana honenana, ny fiara ho vidiana, ny asa ho atao sy izay olona ho vadiana. Raha manana 86.400 segondra izaho sy ianao ao anatin’ny iray andro dia manana safidy 86.400 hatao ihany koa izany.
Tadidio fa ny safidy dia tsy maintsy atao : tsy misy olombelona eto ambany masoandro afaka mialokaloka fotsiny ka hiteny hoe : « aleo ny fiainana no isafidy ho ahy !». Rehefa tsy misafidy aho dia very ny fotoanako, izany hoe ny fiainako mihitsy no ariako fahatany. Ekena fa misy ny toe-javatra tsy azo ihoarana toy ny loza ara-boajanahary, aretina, fahafatesana sns…kanefa raha atao ny fandinihana, teboka amam-paingo eny an-tsefatsefany eny ihany ireny satria maro kokoa ny safidy ataoko sy ataonao nohony zavatra mihatra amintsika ka tsy azo ihoriranana.
Nahoana nefa no mila misafidy ?
Satria ny isam-batan’olona dia nomena andraikitra hitondra zavatra tsara eo amin’ny sehatra misy azy tsirairay…. Natao hampandroso ny fianakaviana ianao sy izaho, natao hitondra fanatsarana eny amin’ny fiaraha-monina. Natao hitondra anjara biriky eo amin’ny firenena fa tsy natao hiolonkolona ka hiaina samirery. Mila ahy sy anao io amin’izao maha izao antsika izao ny tontolo manodidina. Manana zavatra omena sy miavaka ny tsirairay entina hampandrosoana.
Samy hafa ny mandroso sy ny mitsoaka
Ny hoe mandroso dia midika fa fantatro ny toerana tiako haleha sy tiako hisy ahy. Ny hoe mitsoaka kosa dia manao ny fomba rehetra mba hialako amin’ny toerana misy ahy izao.
« Enga anie ny safidinao mba ho taratry ny fanantenanao, fa tsy ny tahotrao. »
Hoy indrindra i Nelson Mandela :
Matetika anefa ny safidy ataoko dia tsy an-kahalalahana fa an-tery, ary ny tahotro ihany no manery ahy : tahotry ny ho faty, tahotry ny hijaly, tahotry ny tsy fahampiana, tahotry ny ho afa-baraka, tahotry ny tsy ho hita, tahotry ny hatosika, tahotry ny ho irery. Mieritreritra isika hoe satria manana fahaleovan-tena dia manana safidy malalaka…. Diniho tsara nefa anie e !
Firifiry ny tanora no misafidy fianarana ho atao satria iny no hatokisany hoe hahitana asa mahavelona ? (tahotry ny tsy fahampiana)
Firifiry ny miafy ao anaty fiarahana hita fa tsy mahasambatra intsony satria hono hoe efa ela niarahana ka tsy ny tany no fady fa ny vavam-bahoaka ? (tahotry ny ho afa-baraka) na ihany koa hoe sao tsy hisy izay ho solony ? (tahotry ny ho irery)
Firifiry ihany koa nefa no miteny hoe aleo tokan-tena toy izay hanome toerana ho an’olona mety hampirafy sy handao ? (tahotry ny hijaly)
Enga anie ny safidinao amin’ny lafin’ny asa mba ho taratry ny zavatra tianao sady hainao fa tsy ho tahotry ny tsy hanam-bola na hoe mati-kenamaso ;
Enga anie ny safidinao amin’ny lafin’ny ara-pitiavana mba ho taratry ny fitiavanao marina ilay olona fa tsy nohon’ny tahotry ny ho irery na nohon’ny tahotry ny taona miroso ;
Enga anie ny safidinao amin’ny fomba fitaizanao ny zanakao mba ho taratry ny fanantenanao amin’ ny hahasambatra azy fa tsy nohon’ny tahotry ny vavan’ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina ;
Enga anie ny safidinao amin’ny lafim-piainana rehetra mba ho taratry ny fanantenanao fa tsy ny tahotrao.
Eto am-pamaranana, tsara ny manamarika fa mety tsy mahazatra ny manontany tena hoe « inona marina moa no manosika ahy hanao izao safidy izao ? », saingy tsy misy mafy tsy laitran’ny zoto. Ajanony hatreo ilay toe-tsaina hoe miaina fotsiny satria tsy afa-manoatra. ‘Ndao hiaina tsara sady am-pahatongavan-tsaina tanteraka. ‘Ndao hanapa-kevitra ny hanantena ka haneho izany fanantenana izany amin’ny safidy atao isan’andro. Tsy mbola tara izao !
fahaiza-miaina, fampivelarana ny maha-olona, fanantenana, manana tanjona, safidy, tanjona mazava
2 commentaires sur “Tsara kokoa ny safidy miainga amin’ny fanantenana fa tsy ny tahotra”
Tena mahaliana! Ny ankabeazan’ny olona izany dia misafidy noho ny tahotra ko! za anisany, fa mba hiezaka hanabe ny taranaka tsy hanaradia ny nataon’ny teo aloha. mbola tsy tara tokoa izao fa dia mankasitraka o!
Mitontona amin’ny fotoana mahamety azy ny zava-drehetra e! Tsy misy tara izany! Mirary soa ary e!